Abavelisi bamatshini beKofu baseChina kunye nabathengisi UChapman
Umngundo NO. I-CPM-150229
Inkqubo yokugqiba umphezulu VDI-33
Izinto zePlastiki PA66 + 45GF
Icandelo lobunzima 120.61g
Ubungakanani Icandelo 155 * 85 * 52 mm
Ubukhulu zomngundo 450 * 400 * 421mm
Igama lendima Izinto umatshini Coffee
Umngxunya womngundo 1 * 1
Imbaleki isango lendawo
Izinto zomngundo 1.2343ESU / 1.2312
Umjikelo woBomi beMold Ngama-500,000
Ixesha lokukhokhela Iintsuku ezingama-45
Ixesha Lomjikelo Womngundo: Ngama-38
Owona matshini wekhofi ungcono awuthethi ukuba awudingi kuphithizela ngokuthenga iimbotyi zekofu kunye nokuzisila. Ewe kuyathandabuzeka kwabanye malunga nenkcitho kunye nenkunkuma, ke ngekhe sibize oyena menzi wekhofi ubalaseleyo, kodwa kwelinye icala, ikofu yecapsule icacile. Ewe, imfanozandi elungileyo.
Oomatshini beekofu zekofu bavelisa iziphumo ezingaguquguqukiyo ekunzima ukufikelela kuzo kusetyenziswa oomatshini be-espresso esemgangathweni kunye neemodeli zebhontshisi ukuya kwindebe. Ngomatshini wecapsule ulayisha ngokulula kwi-pod, ucofe iqhosha kwaye uphume umjelo wegolide emnyama emnyama enesitayile esinepunchy njengeyokugqibela.
Le nxalenye yeplastiki yinxalenye ebaluleke kakhulu kumatshini wecapsule wekofu, ohambisa zonke iintshukumo zomatshini wekofu. Udlale eyona ndima ibalulekileyo yozinzo kunye nesikhokelo.
Egqithileyo Ikhava yasemva yomlandeli
Okulandelayo: Isiciko esincinci sokuhambisa i-servo